Xasan Shire oo madax ka ah hey’adda Difaacayaasha Xuquuqda Aadanaha ee Africa, ayaa ka hadlaya tacaddaiyada xuquuqda aadanah Somalia.
Colaadda mudada dheer ka socotay Soomaalyia, ayaa weli waxaa ku dhimanaya dadka rayidka ah, xadgudubyada xuquuqda aadanahana wey sii socdaan.
Xadgudubayadaas ayaa la sheegay inay ku lug leeyihiin labadaba al-Shabab iyo xoogagga shisheeye iyo ciidamada dowladda ee ka soo horjeeda.
Waxaa kaloo hey’adaha xuquuqda aadanaha ay dowladda Somalia wax ka saareen mas’uuliyadda xad gudubyadan, maadaama ayka soo bixi weysay waajibaadkii ka saarnaa ilaalinta ammaanka shacabka ay masuuliyadda u qaaday.
Eedeynmihii ugu dambeeyay ee ku aadan xad gudubyada ayaa ka soo baxayay qaar ka mid ah dadka ku nool gobolka Gedo oo ka cabanaya jawaabihii ay ciidamada Kenya ka bixiyeen weerar laba toddobaad ka hor ay al-Shabaab ugu geysatay saldhigii ay ku lahaayeen deegaanka Ceel-Cadde.
Wariyeheenna Maxamed Cabdi Xassan Sandheere ayaa xadgudubyada Somalia ka dhaca kuwooda ugu waaweyn wax ka weydiiyay, Xasan Shire Sheekh oo madax ka ah hey’adda Difaacayaasha Xuquuqda Aadanaha ee Africa.
Go'aanka Sweden Oo Walaac Laga Muujiyey
Gaas: Go'aanka Waxaa leh Shacabka Puntland
Ciidanka Kenya Oo Ka Baxay Buulo-Gaduud
Wasiirada Oo Ansixiyey Go'aankii Madasha
Haweenka Oo Go'aankii Madasha Taageeray
Maxkamdeynta Gbagbo Oo Ka Socota Hague